Imagga: API iray ho an'ny fampidirana sary ho fankatoavana sary ampiasain'ny fitsikilovana artifisialy | Martech Zone
Imagga: API iray ho an'ny fampidirana sary ho fankatoavana sary ampiasain'ny faharanitan-tsaina
Alakamisy Febroary 11, 2021 Alakamisy Febroary 11, 2021 Douglas Karr
Imagga dia vahaolana iray fankasitrahana sary iray manontolo ho an'ireo mpamorona sy orinasa hampiditra ny fanekena sary ao amin'ny sehatr'izy ireo. Ny API dia manolotra fampiasa maro, anisany:
endrika efa - sokafy ho azy ny atiny an-tsary. API mahery hanasokajiana ny sary eo noho eo.
Color - Avelao ny loko hitondra dikany amin'ny sarin'ny vokatrao. API mahery amin'ny fitrandrahana loko.
Cropping - Miteraha thumbnails tsara tarehy ho azy. API matanjaka ho an'ny fiompiana mahalala ny atiny.
Fampiofanana manokana - Ampiasao ny sarin'i Imagga AI handamina tsara kokoa ny sarinao amin'ny lisitry ny sokajy misy anao.
endrika Fankasitrahana - Vohay ny fanekena ny tarehy amin'ny rindranasao API mahery hananganana fanekena endrika.
Multi-teny - Amin'izao fotoana izao dia misy fiteny 46 tohanana miaraka amin'ireo sokajy, sokajy ary API fanamarihana an'i Imagga.
Tsy azo antoka amin'ny asa (NSFW) - Fanaraha-maso ny atiny ho an'ny olon-dehibe automated fiofanana momba ny haitao amin'ny haitao momba ny sary.
Tagging - Manomeza ho azy ny tag ho an'ny sarinao. API matanjaka amin'ny famakafakana sary sy fahitana.
Visual Search - Manomeza fahafaha-hita ny vokatra amin'ny fampiharana anao. API matanjaka hananganana fahaiza-manao fikarohana.
Io sehatra io dia manome alalana amin'ireo fangatahana orinasa 180 manerana ny firenena 82 miaraka amin'ny fanombohana, mpamorona ary mpianatra mihoatra ny 15,000.
Avereno jerena ny tahirin-kevitra API Imagga
Ahoana no ahafahan'ny fanekena sary manampy ny orinasa?
Misy fomba iray taonina ahafahan'ny fikambanana manaparitaka sary hanatsarana ny fahombiazan'ny anatiny sy hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa ivelany. Ireto misy vitsivitsy amin'izy ireo:
mora foana alamino ny fanananao nomerika ary ataovy izay hikarohana azy ireo amin'ny alàlan'ny fanamarihana mandeha ho azy, fanasokajiana ary fikarohana. Raha manana mpampiasa am-polony na an-jatony mandefa sary ianao ary manakorontana ny fitantanana ny fananana dizitaly, ny fampiasana fitaovana toa an'i Imagga dia ahafahana mandeha ho azy ny fizotranao ary hampiakatra ny fahombiazan'ny anatiny ao amin'ny orinasanao.
manatsara personalization votoaty mavitrika amin'ny alàlan'ny fanamarihana sy fitrandrahana loko. Alao an-tsaina ny fampisehoana ireo vokatra nifaneraserany indrindra fa tsy nandidy ny hanivàn'izy ireo tanana sy hisafidianana azy ireo. Azonao atao ny mandamina ny laharam-pahamehana sy ny fampisehoana sary mba hifanaraka amin'ny personas fantatrao amin'ny mpitsidika anao.
Manamboara rindranasa na serivisy manome valiny ho azy ireo ho an'ny mpampiasa anao sary izay ampakarin'izy ireo. Izay no fahefan'ny Imagga Plantsnap, fampiharana finday izay afaka mamantatra ireo zavamaniry, voninkazo, cacti, succulents ary holatra ao anatin'ny segondra.
Manamboara faneva mandeha ho azy dingana ho an'ny sary NSFW ampakarin'ny mpampiasa ao amin'ny sehatra misy anao. Ny sokajy dia misy ny sary miboridana, ny ampahany amin'ny vatana voafaritra mazava, na ny fitadiavana atin'akanjo.
Fantaro ireo singa na vokatra hita maso amin'ny tontolon'ny famokarana na famokarana. Ny injenieram-pirenena Seoul dia injeniera a Mialà amin'ny fahamarinana vahaolana izay namantatra sy nanome valisoa ireo mpianatra nanary araka ny tokony ho izy ny fitaovana mety ao anaty fitoeram-bokatra marina.
Imagga koa dia manolotra vahaolana eo an-toerana raha mitaky angon-drakitra marobe ny orinasanao, tsy maintsy miantoka ny fiainana manokana, na mitaky fidirana sy fidirana data noho ny fepetra takian'ny lalàna.
Makà lakilen'ny API maimaim-poana
Tags: aifahaizana artifisialyfahitana lokoendrika fankatoavanafanasokajiana saryfanapahana sarysary detectionfanekena saryfikarohana saryfametahana saryfianarana milinamulti-tenytsy azo antoka amin'ny asansfwmaso fikarohana
Ireo fironana 5 ambony amin'ny fitantanana ny fananana nomerika (DAM) nitranga tamin'ny 2021
Torolàlana hanatsarana ny mailaka misokatra, Click-Through ary ny tahan'ny fiovam-po